OPPO ဖုန္း Warranty Policy | OPPO မြန်မာ
OPPO ဖုန်း Warranty Policy
ယခုPolicy သတ်မှတ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနယ်မြေ တွင်ရောင်းချသည့်OPPO ဖုန်းများတွင်သာအကျုံးဝင်သည်။Customer ပုံမှန်အသုံးပြုနေစဉ်တွင်စက်ပစ္စည်းError များဖြစ်ပွားခြင်းမျိုးကို၊OPPO မှ Warranty ကာလအတွင်း၊အခမဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပေးမည်။
ဖုန်း（Battery အပါအဝင်） 12 လ Accessories ဈေးနှုန်းနှင့်၊လက်ခ
Earphone,USB,Adapter စသည့်ဖုန်းနှင့်တွဲပါသည့်Accessories6လ Accessories ဈေးနှုန်းနှင့်၊လက်ခ
Bluetooth Earphone 12 လ Accessories ဈေးနှုန်းနှင့်၊လက်ခ
Smart watch 12 လ Accessories ဈေးနှုန်းနှင့်၊လက်ခ
Warranty အရည်အသွေး ကတိ
2. လဲလိုက်သည့်Accessories များမှာ၊နဂိုကျန်သေးသည့်Warranty သက်တမ်းအပြင်၊ပြင်သည့်ရက်မှ၃လWarranty ၊နှစ်ခုထဲမှာမှသက်တမ်းပိုများသည့်တစ်ခုဖြင့်Warranty ပေးမည်ဖြစ်သည်။
3.အကယ်၍ဖုန်းအပြင်ပါသည့်Accessories များError တက်ပါက၊အသစ်ပြန်လဲပေးခြင်း၊ပြန်လဲလိုက်သည့်ပစ္စည်းအပေါ်Warranty သက်တမ်းပြန်တွက်ပေးသည်။
1.Warranty Card နှင့် လက်ခံဘောင်ချာများသည်သင့်ဖုန်းအာမခံခံစားခွင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောသက်သေဖြစ်သည်၊ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပါ။
2.အကယ်၍လက်ခံဘောင်ချာနှင့် Warranty Card ပျောက်ဆုံးသွားပြီး၊မိတ္တူလဲမပြနိုင်ပါက၊ကုန်ပစ္စည်း၏စက်ရုံထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲမှ3လထက်တိုးပြီးသင့်E-Warranty ရက်စွဲဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ကာ၊သင့်အတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိစေမည့်ရက်စွဲဖြင့်အတည်ပြုပေးပြီး၊အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်သည်။
3.OPPO Company မှဖုန်း၏လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမှလွဲ၍အခြားပစ္စည်းများကိုWarranty မပေးပါ။(ဥပမာ~အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်စာအုပ်၊Warranty Cardစသဖြင့်)
4.Oversea မှဝယ်ထားသည့်OPPO Product များကိုပြည်တွင်းတွင်Warranty မပေးပါ။အကယ်၍ Charges ပေးပြင်မယ်ဆိုလျှင်၊Accessories ပြဿနာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရန်၊Service Center များထံဦးစွာအကြောင်းကြားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။အခြားAccessories（သားရေအိတ်、Screen Cover、Silicon Cover）စသည်တို့ကြောင့်ဖုန်း ကိုထိခိုက်ပြီး၊ပုံမှန်အတိုင်းမလုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးမှာ၊ဖုန်းအသစ်ပြန်လဲလို့မရပါ။Accessories အသစ်ပြန်လဲပေးဖို့ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
5.Warranty In ဖြင့်လဲလိုက်သည့်ပစ္စည်းများအားလုံးOPPO မှပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
User Fault ကြောင့်ဖြစ်စေ၊အောက်ပါအချက်ထဲမှတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ၊Warranty စည်းဘောင်နှင့်မကိုက်ညီပါ။သို့သော် Charges ပေးပြီးပြုပြင်နိုင်သည်။
2.Warranty Card ၊လက်ခံ ဘောင်ချာမရှိခြင်း(Warranty သက်တမ်းရှိသေးသည့်အကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည်မှလွဲ၍)
3.OPPO Official ပေးသည့်Warranty စည်းကမ်းချက်များမှလွဲ၍၊ဥပမာ~အရောင်းဆိုင်များမှကတိပေးသည့်အချက်များစသဖြင့်
5.ပြင်ပဖိအားကိုမကာကွယ်နိုင်ခြင်း(ဥပမာ~ရေဘေး၊မီးဘေး၊ငလျှင်ဘေး၊မိုးကြိုးဘေး၊Traffice Accident စသဖြင့်) တို့ကြောင့်ပျက်စီးသွားသည့်ပစ္စည်းများ
6.အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းမရှိပဲ၊ဖုန်းကိုဂရုမစိုက်ခြင်း၊သေချာမထိန်းသိမ်းခြင်း၊စသည်တို့ကြောင့်ပျက်စီးသွားသည့်ပစ္စည်းများ၊ဥပမာ~အသုံးပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အလွန်မြင့်ခြင်း/အလွန်နိမ့်ခြင်း၊OPPO ၏Original Accessories ကိုအသုံးမပြုထားခြင်းစသဖြင့်။
7.ကုန်ပစ္စည်းသဘာဝအလျောက်ပွန်းပဲ့ခြင်း（ဥပမာ~အပြင်Cover ၊ Key ၊Screen ၊အခြားသောAccessories များ）
8.ကိုယ်တိုင်ဖုန်းပြင်ခြင်း၊ဖြုတ်ခြင်း၊လဲခြင်း၊ rootဖောက်ခြင်းစသည့်User Fault ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းများ။
2.ဖုန်းမပို့ခင်ဦးစွာ၊မိမိ၏အချက်အလက်များကိုBack up ယူထားပါ။(ဥပမာ~Contact ,message ,Photo စသဖြင့်)backup ယူပြီးလျှင်မိမိကိုယ်တိုင်Delete ပြုလုပ်ပါ။နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများမဖြစ်စေရန်(ဥပမာ~အချက်အလက်များပေါက်ကြားခြင်း၊ပျက်စီးသွားခြင်း)သင့်၏ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေးစားစွာဖြင့်၊OPPO Service Center နှင့်ဝန်ထမ်းများအားလုံးမှ၊သင့်အချက်အလက်များကိုBackup ယူပေးခြင်းနှင့်ပြန်ရအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုတာဝန်မယူပါ။အချက်အလက်များပျောက်ဆုံးခြင်း၊ပေါက်ကြားခြင်းစသည်ကြောင့်ဖြစ်ပွားလာသည့်ပြဿနာများကိုလည်းတာဝန်မယူပါ။ အခြားဖြေရှင်းချက်များ
3. OPPO မှ ပေးသည့် lock ဖြည်သော၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ဖြစ်လာနိုင်သည့် risk များမှာသုံးစွဲသူကိုယ်တိုင်၏တာ၀န်သာဖြစ်ကြောင်းသဘောတူညီပါသည်။ ဥပဒေပြဌာန်းထားသည်မှလွဲ၍၊ OPPO(သို့မဟုတ်)သက်ဆိုင်သည့်၀န်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူသည်lockဖြည်သော၀န်ဆောင်မှုအပေါ်မည်သည့်ပုံစံမျိုးဖြင့် ဖြစ်စေ statement များအတွက် ကတိသို့မဟုတ်အာမခံချက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။OPPO(သို့မဟုတ်)သက်ဆိုင်သည့်၀န်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူမှပေးသည့်၀န်ဆောင်မှုသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဟုအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။၀န်ဆောင်မှုပြတ်တောက်သည့်အခြေနေမျိုးလဲရှိနိုင်သည်။ အချိန်မီ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း၊လုံခြုံခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအမှားလုံး၀မရှိခြင်းစသည်တို့ကိုကတိပေးအာမခံချက်များပေးမည်မဟုတ်ပါ။
1. အခြားသောစိုထိုင်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊အရည်ဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ဆိုးရွားစွာပျက်စီးခြင်းနှင့်တရားမဝင်ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက်အခြားသောError များဖြစ်ပွားနိုင်သည်။(ဥပမာ~ဖုန်းမပြင်ခင်တွင်ဖုန်းဆက်၍ရသေးသော်လည်း၊ပြင်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်လို့မရတော့ခြင်း၊ဖုန်းpower ဖွင့်လို့မရတော့သည့်အခြေအနေမျိုး၊ဖုန်းမပြင်ခင်ဦးစွာService Center ဝန်ထမ်းမှဖုန်းပြင်ခြင်းနည်းလမ်းအရ၊သဘောတူလက်မှတ်ထိုးရမည်။
2.ထိုService Policy မှာတရားဥပဒေနှင့်ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်သည့်အချက်များရှိပါက၊နိုင်ငံတော်ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုသာအတည်ပြုမည်။
* Find X2 စီးရီး၊ Reno 10x Zoom နှင့် Find X အသုံးပြုသူများအတွက်သင်ယခု International Warranty Service ကိုခံစားနိုင်သည်။